Njem njem anọ a tụrụ aro ka ị mee na Stockholm | Akụkọ Njem
Njegharị anọ a tụrụ aro ka ị mee na Stockholm
Mariela Carril | | Stockholm, Nduzi
Akwụkwọ akụkọ Sweden ọhụrụ etinyela obodo ahụ na isi obodo ya, Stockholm, n'anya ụwa. Mgbe ị gụsịrị akwụkwọ akụkọ nke Henning Mankel ma ọ bụ Stieg Larsson, ọ na-eme ka ịchọrọ ịga obere njem gaa Sweden, ọ bụghị ya?
Stockholm bụ maa mma obodo, ikekwe ọ bụghị otu n'ime ndị dị ọnụ ala na Europe ma ukwuu tụrụ aro ileta na mpụga nke oyi. Na-eji ohere a ama ama na-atọ ya ụtọ n'aka ndị ode akwụkwọ kachasị n'ụwa, ruo oge ụfọdụ ugbu a onyinye ndị njem nleta ya toro ma n'ogige ntụrụndụ ya, ebe ngosi ihe mgbe ochie na ebe nkiri bụ ya ije ma ọ bụ njegharị ndị na-akpọ anyị taa.
2 Mmụọ Mmụọ nke Stockholm
3 Stockholm ụlọ elu njegharị
4 Njem Millenium
5 Njem njem ụgbọ mmiri Ocean
Bụ isi obodo obodo kachasị biri na mba ahụ, nke nde mmadụ atọ na ọkara bi na ya, ihe dịka n’agbata obodo ahụ na gburugburu ya. Ọ nwere ihe dị iche na nke ahụ akwuru na agwaetiti nke agwaetiti iri na ano bụ nke dị na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ, n'ọnụ ọnụ Ọdọ Mälarren na Oké Osimiri Baltic.
Osimiri a bụ ọdọ nke atọ kachasị ukwuu na Sweden ma na-asọba n'oké osimiri. Stockholm na-adị n’agwaetiti ya ka enwere ọwa mmiri na akwa mmiri n’ebe niile. Ihu igwe ya bụ oyi, dị ka nke dị n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke United States ma ọ bụ n'ebe ugwu Canada, na-enwe nkezi 10 º C n'ime afọ. O nwere otutu ahihia, otutu oke ohia, ya mere, mgbe oge gbanwere agba na agbanwe ma o di mma nke ukwuu.
Kpachapụ anya Ọ bụghị ihe amamihe dị na ịga na Disemba n'ihi na ọ bụ oyi na e nwere nnọọ awa ole na ole nke anwụ, ihe dị ka isii. Na mpụga nke oge a ọ bụ obodo obi ụtọ, nke nwere ọtụtụ anwụ na ezigbo udu mmiri, gburugburu 25'C. Ma ọ bụ kpomkwem na idụhe kacha mma ime njegharị anọ nke na-egosi anyị:
Mmụọ Mmụọ nke Stockholm
Ọ bụ ihe Stockholm Mmụọ Mmụọ, otu Ije ije 90 gafere obodo ochie si n'obodo. Ebumnuche bụ ịnye ozi ma kọọ akụkọ kachasị ụjọ ma ọ bụ nke dị omimi nke obodo ahụ hụla kemgbe ọtụtụ narị afọ. O gunyere icho uzo na uzo nile na-ege akuko, ihe omimi, akuko banyere ihe otiti, igbu mmadu na mmuo.
Njegharị dị na Swedish na Bekee na enwere ije site na Gamla Stan na nke ọzọ site na Södermalm. The Ghost Walk site na Gamla Stan bidoro na Järntorget, n'ime etiti akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ Gamla Stan. Ọ bụ square nke dị na okporo ụzọ okporo ụzọ Västerlanggatan na Österlangattan. Nke ọzọ, Ghost Walk Södermalm, bidoro na Mosebacke Torg 3, nke dịdebere Södra Teatern.
Enweghị otu n'ime njem ndị a kwụsịtụrụ n'ihi mmiri ozuzo yabụ ọ bụrụ na mmiri zoo, ị ga-eweta nche anwụ. Nlegharị ahụ niile dị n'èzí ka ị kwesịrị ịtụle iweta ihe na-ekpo ọkụ, mmiri na akpụkpọ ụkwụ dị mma. Ọ bụrụ na oge dị, onye ndu ahụ nwere ike ime ka ndị otu ahụ banye n'ụlọ echekwala. N'ikwu okwu banyere otu dị iche iche, ndị a enweghị ihe karịrị mmadụ iri anọ na ise mana n'ezie ha anaghị adịkarị otu.
Ná ngwụsị nke ije ha na-ere gị a Akwụkwọ onyinye na ị nwere ike ịgbanwe maka nri abalị n'ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ịhọrọ n'etiti iri na otu nhọrọ. Kedu ka isi akwụ ụgwọ? Ọ bụrụ na ị na-eme naanị mgbe ahụ ị ga-akwụ ụgwọ ozugbo na onye ndu ahụ, ọ bụrụ na ị na-eme ngwugwu na nri abalị mgbe ahụ ị ga-ekwurịrị site na weebụsaịtị ma soro ntuziaka.
Ikekwe akụkụ kachasị mma nke ije bụ ndị nduzi ahụ n'onwe ha, yi uwe ochie na okpu elu. Ego ole ka ị ga-eme nlegharị anya na Stockholm? 200 SEK kwa okenye (20, 70 euro), na 100 kwa nwata. N'ezie, ọ bụ naanị otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem nlegharị anya nke na-enye ụdị njem a ghostly na nke ahụ bụ Stockholm Ghost Walk.
Stockholm ụlọ elu njegharị
Nke a bụ nhọrọ ọzọ dị iche na nke izizi. Na n'elu ụlọ njegharị ọ na-enye gị ohere jee ije na elu nke mita 43 nwere echiche dị egwu na pụrụ nnọọ iche na obodo. Ije dị iche iche bidoro na akpụrụ akpụ nke Birger Jarl, ebe a na-enwe nzukọ na onye ndu, dịkwa na Swedish, Bekee na German. Ga-arịgo n’elu ụlọ omebe iwu, n'àgwàetiti Riddarholmen, dị nso na Gamla Stan. Site ebe ahụ ị ga-amụta maka akụkọ ihe mere eme nke isi obodo Sweden na-enwe echiche kacha mma.
Njegharị ahụ na-ewe otu awa na nkeji iri na ise, ma ọ bụ obere ma dị ọnụ ọnụ KR595 (Euro 62). Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ya, ị ga-edebanye aha n'ịntanetị, na-ahọrọ ụbọchị na kalenda. Anaghị anabata osisi ma ọ bụ osisi mkpuchi maka akara nche. Oge mbụ a bụ otu ụzọ si Takvandring.
N'isochi ubochi akwukwo nke onye nwuru anwu Stieg Larson obodo adọtala a ndị njem nlegharị na-agagharị n'okporo ụzọ ndị pụtara na akwụkwọ akụkọ. Ije a bidoro na Bellmansgatan 1, ebe Mikael Blomkvist bi, na-aga n'ihu n'ọfịs nke akwụkwọ akụkọ Millenium, ụlọ obibi okomoko Lisbeth Salander na ebe ndị ọzọ site na akwụkwọ na ihe nkiri.
Ọ bụrụ na ị meela ya oge ụfọdụ, enwere ike ịme ya ọzọ n’ihi akụkọ na ikwu na-emelite. N'ezie, akwụkwọ ọzọ dị na saga adịbeghị anya wee sonye na njem ahụ. Nduzi na-ejegharị n'asụsụ Bekee bụ na Satọdee na 11:30 nke ụtụtụ, ma n’agbata July na September a na-agbakwunye otu Thursday na Thursday elekere isii nke mgbede. Mgbe ịzụrụ tiketi ahụ, e nwere adreesị nke ebe nzukọ.
Na-azụta tiketi na Stockholm Visitor Center, enwere igwe eji arụ ọrụ iji rụọ ọrụ ebe ahụ.
Njem njem ụgbọ mmiri Ocean
Stockholmbụ Stockholm obodo nwere nnukwu mmiri gbara gburugburu enweghị ihe mere ị ga-eji nọrọ na mmiri. Ọ bụ ya mere ị ga - eji were ohere maka njem njegharị Ocean Bus na nweta isi obodo Sweden na mmiri. Ọ bụ ihe ọ bụla ma a bọs-ụgbọ mmiri nke na-agafe ebe kachasị mkpa na Stockholm malite na ala ma na-aga n'ihu n'elu mmiri.
Njegharị ahụ Ọ bụ bekee wee bido na Strömgatan, na-esote Royal Opera. Gafere na Grand Hotel, Royal Theater, Strandvägen, Royal Palace, Museum of Modern Art, Kastellholmen, Tivoli Gröna Lund, Skansen, Junibacken, Vasa Museum, Katarinahissen, Fotografiska, Stadsgardskajen, wdg. Enwere ike idobe tiketi n'ịntanetị ma kwụọ ụgwọ n'oge ịbanye. Ọ nwere ọnụahịa nke SEK 260 kwa otu (Euro 27).
Dịka ị pụrụ ịhụ, Stockholm na-enye ihe dị iche iche ihe ngosi nka mgbe ochie, ụlọ ahịa na veranda nka. Ọ bụrụ na ihu igwe na-eso nke ọ bụla n'ime njem anọ a pụrụ iche ọ bụ ihe magburu onwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Stockholm » Njegharị anọ a tụrụ aro ka ị mee na Stockholm
7 ịrịba ebe ke Slovenia